Kana kubuda pachena kukava chinhu - Tamban RELAY
By TELES RELAY On Nyamavhuvhu 10, 2020
Patinopinda muchikamu chechipiri chechikamu chetatu chino cha2020, nyika yebasa haina kumbobvira yawana manyawi akadaro, ichitsvaira zvese zvemberi kwegore rakasviba kwazvo muupfumi hwenyika. Pakati pekushushikana kwehupfumi uye dambudziko rehutano, mazhinji emakambani akagadzirisa maitiro avo ekutarisana nemusika wakashata. Zviri munharaunda ino kuti vechidiki vanopedza kudzidza kana kudzora vanotsvaga basa vanofanirwa kuratidza hunyanzvi kubata pfungwa dzeiye unogamuchira anogamuchira zvimwe zvinotenderera kupfuura zvaakajairwa. Nzira yekumira kunze nekusimudzira iyo diki yakawedzera iyo ichaita mutsauko?
Tsamba yekuvhara pane vitamini
Zvakawanda kudarika kurovedzera muviri, tsamba yako yekuvhavha ndiyo yekutanga po yekudyidzana pakati pekambani neinotsvaga basa. Iyo inopa simba kune zvese izvo CV yako isingakwanise kududzira kupfuura yako nyanzvi kana yekudzidza kumashure. Iyo inochengetedza chinzvimbo chako, inoshandura maitiro anowanzotsvakwa neanodzidzisa aneruzivo. Kuumbwa kwaro kunoda humwe hunhu hwacho hunozoita kuti uve wakasarudzika kune chimiro chinowirirana chaizvo nechinzvimbo. Haisi iyo ingori mubvunzo wekutaura nezve nzwisiso yako yemusika mune iyo yakanangwa kambani inoshanda, asi zvakanyanya: kugovana chiratidzo chayo, kunzwisisa iyo yeDNA.
Iyo nzwisiso yemhando yakatarwa
Nepo nhamba inogara ichikwira yemakambani achitaura online kuburikidza neakazvipira mapuratifomu kana avo ecosystem, ikozvino pane maficha anobvumira vanotsvaga basa kuti vanzwisise zviri nani mhando dzekutengesa dzakatarwa, senge GoWork.fr. Nhoroondo yechokwadi yemazano kune vashandirwi, GoWork.fr inopa kudada kwenzvimbo kune vashandi vane ruzivo rwekugovana ruzivo vanobvumira vanotsvaga basa kuti vazive zvakawanda pamusoro pemakambani avari kushandisa mumatunhu avo. Ongororo pasi pechisimbiso chekusazivikanwa chinoita mutsauko uye inoratidza kambani zvakasiyana. GoWork.fr ndeyekutanga uye yakakoshesa nzvimbo yakanakisa yekuunza pamwe chete manejimendi nevashandi, pakupedzisira vachiita kuti ruzivo ruve nekudyiswa kudzosera kuvandudza kwezvibereko uye nemamiriro ekushanda. Parizvino pamakondinendi matanhatu, iyi portal inovhura masuo kunguva nyowani muhupenyu hwekambani nekuda kweiyo nzira yakajeka yeiziviso zvevashandi kubva pamakumi ezviuru emakambani anogara muFrance.
Iyo yakanaka yakagadzirirwa mutambo
Matarenda edunhu Corse, of l 'Occitanie ou Great East Ita kuti matunhu avo ararame zvakasiyana, kwete munhangemutange yevakawana mazano asi zvakanyanya nekugadzira zvakapfuura zviitiko zvavo ruzivo rwakakwana rweruzivo zvichiita kuti vanzwisise zvirinani kutorwa neanotsvaga basa. Nekudaro iyo yeFrench vhezheni yeGoWork.fr portal inopa mukana wekuwana ruzivo rwakakosha munguva dzino dzekutambudzika kwehupfumi apo tariro dzose dzinoenda pamwe nekudzoka zvishoma nezvishoma. Tora maonero kune waunoshandira nekuunganidza hunhu hwemaitiro acho nekutenda kune zvakasununguka zvakapihwa nevanozove vamwe vako mangwana. Nyika itsva iri kuvhurikira iwe uye zviri kwauri kuziva kuti usvike sei. Sarudza kunze, sarudza nyika dziri padyo newe, gadzirira uende.
Superior Council yeMagistrature: Yakazara kero neMutungamiriri weNyika
Russia: Clinton Njié anotanga mwaka wake zvakanaka
Isa chigadziro pane PC - Matipi